Umaki: isilinganiso semidiya yezenhlalo | Martech Zone
Umaki: ukulinganiswa kwezokuxhumana nabantu
NgoLwesithathu, Okthoba 7, 2015 Douglas Karr
Ukukala impumelelo yezokuxhumana kunzima kakhulu kunabantu abaningi abakholelwa ukuthi. Imithombo yezokuxhumana inezinhlangothi ezintathu: Ukuguqulwa okuqondile - kulapho abathengisi abaningi bafuna ukukala imbuyiselo yotshalo-mali. Isixhumanisi siletha isivakashi ngqo kusuka kokuthunyelwe kwezokuxhumana noma sabelane ngakho ukuguqulwa. Kodwa-ke, angikholwa ukuthi kulapho iningi le-ROI likhona. Ukuguqula Ukuguqula - Ukuba nomphakathi ofanele ophethe igama lakho kunamandla amakhulu. Mina
NgoMgqibelo, Agasti 8, 2015 Douglas Karr
Akulula njengoba abantu becabanga. Impela, ngemuva kweminyaka eyishumi ngiyisebenza, nginokulandela okuhle kokulandelayo ezinkundleni zokuxhumana. Kepha amabhizinisi amancane ngokuvamile awanayo iminyaka eyishumi ukukhuphuka nokwenza umfutho isu labo. Ngisho nakwibhizinisi lami elincane, ikhono lami lokwenza uhlelo lokukhangisa ngemidiya yezenhlalo lwebhizinisi lami elincane kuyinselele. Ngiyazi ukuthi ngidinga ukuqhubeka nokukhulisa ukufinyelela kwami